प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले लेख प्रेमपत्र - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाममा प्रेमपत्र लेखेका छन् ।
बिहीबार प्रवक्ता शर्माले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ‘समाधान कोरौं समाधी नखनौं’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रेमपत्र लेखेका हुन् ।
”समाधान कोरौं समाधी नखनौं”
विश्वब्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको जोखिमसंग जुध्न यतिबेला अन्य सबै राजनैतिक विमती थाती राखेर हामी यहाँको साथमा उभिएका छौं र ‘सरकारमा संगै नरहेर पनि संगै लड्न सकिन्छ’ भन्ने संस्कार साथ यो संकटको घडी सरकारलाई साथ दिन सबै दल,संस्था र समुदायलाई अपील गरिरहेका छौं ।
हाम्रो आग्रह छ यो प्रकरणमा चिनको सफलता एवं इटली र स्पेनको भयावह स्थितिबाट गहिरो शिक्षा लिउं । हामी थप चुक्यौं भने भीषण स्थिति ब्यहोर्नेछौं ,सहि ढंगले जुट्यौं भने नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्न समर्थ हुनेछौं । थोकमा मृत्यु हेर्ने कि एकएकलाई जोगाउने? यो यक्ष प्रश्न इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न बन्न पुगेको छ ।
हाम्रो आग्रह छ लक डाउनको दोस्रो चरणको यो घडी हालसम्मको प्रगति र कमजोरीको वस्तुनिस्ठ समिक्षा गरौं,कमजोरी अन्त्य गरौं र अब पछिल्लो कदम निकै ब्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाऔं । यो संक्षिप्त पत्रमा पृष्ठभूमिदेखि समग्र विश्लेषणमा म जान चाहन्न । तत्कालीन परिस्थिति,प्रश्न र चुनौती बारे आम नेपालीको भावना प्रतिनिधित्व गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
२) हालसम्म पाँच नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएको मध्ये एक स्वस्थ भएर फर्किए भने चार उपचाररत छन् ।
बुटवलको एक अस्पतालमा लाश उठेन,बिराटनगरमा चार अस्पताल दौडाउंदा दौडाउंदै एक महिलाको मृत्यु भयो ।
कोरोना बाहेक अन्य रोगलेपनि मृत्यु हुन्छ , तर सुरक्षित रुपले परिक्षण गर्न पिपीई नपाउंदा कयौं ठाउँमा कोरोनाको सन्त्रासले बिरामी हेर्न स्वास्थकर्मी हच्केका छन् ।
प्रधानमन्त्रीकै जिल्लामा चार बर्षे बालकको ज्वरो जचाँउन जाँदा एक अस्पतालको गेटबाटै अभिभावक फर्काइए । यस्तो स्थिति समाधान गर्न यहाँको ध्यान तत्काल जान जरुरी भएको छ ।
४) यसविचमा विदेशबाट जति नेपाली आए,ती मध्ये थोरै मात्र क्वारेन्टाइनमा छन् । बाँकी कहाँ छन् सरकारसंग तथ्यांकसम्म छैन । क्वारेन्टाइन, परिक्षण र उपचारको ब्यवस्थित कार्ययोजना कठोरता पुर्वक कार्यान्वयन गरेर समुदायलाई आश्वस्त राख्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउंदछु ।
५) कोरोना भाइरस प्राणघातक रहेको सूचना विश्वब्यापी भएको चार महिना पुगिसक्दापनि पीपिइ,परिक्षण कीट, भेन्टिलेटर लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको पर्याप्त जोहो नगरिनु सरकारको गैह्रजिम्मेवारी थियोे । यो प्रकरणको चार गल्ती क्रमशः स्मरण गराउन चाहन्छु
क ) समयमै सामग्री आयातको योजना, तयारी र प्रक्रिया नथाल्नु ।
अलिअघिसम्म हजारौंलाई अव्यवस्थित ढंगले प्रवेश गराएका थियौं ,आज सानो संख्यामा सिमानामा आइपुगेका नेपालीलाई ब्यवस्थित रुपले प्रवेश गराउने दायित्व देशको हो । संकटमा परदेशीलाई त सेवा पुर्याउनु पर्छ भने संकटमा आफ्नो देशमा शरण नपाउनु भन्दा ठूलो अन्याय के हुन सक्दछ । अत्यन्तै कारुणिक यो यथार्थप्रती प्रधानमन्त्रीज्युको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।
हामी फेरि पनि यो संकटमा यहाँको साथमा छौं, दृढ ढंगले परिस्थितिको नेतृत्व गर्न यहाँलाई प्रतिपक्षी दलको हरसम्भव साथ र सहयोग रहनेछ । जय नेपाल !
ट्याग्स: नेपाली कांग्रेस, प्रेमपत्र, विश्वप्रकाश शर्मा